Dowladda oo soo saartay hindiso ay uga hortageeyso “Fal dambbiyeedka kufsiga” | Somaliska
Tan iyo intuu dhashay kacaankii loogu magac daray #meToo (Aniga sidoo kale) waxaa soo shaac baxayey maaliba maalinta ka dambeeysa shaqsiyaad u badan dumar oo lugula kacay falal anshaxumo ah, kuwaas oo ragga ay isla shaqeeyaan ama madaxda u ah ay kula kaceen.
Haddabba dowladda Iswiidhan ayaa manta soo saartay hindise u eg sharci la filayo inuu dhaqan galo sanadka soo socda ee 2018-ka. Ra’iisal wasaaraha dalkaan Iswiidhan Stefan Löfven oo maanta qabtay shir jaraa’id ayaa sheegay in galmo dhex marta labbo ruux uu noqdo mid xor ah oo aan qasab ku iman. Islamarkaasina aan la qasbi karin qof aan isagu HAA oran. Dowladda waxaa ay kale oo ay ku camal jirtaa qorshe siddii ciqaabta loogu kordhinayo shaqsiyaadka lugu helo falalka noocas ah, balse ay ka horeeyso in la isku af garto magaca bulshado isku raacsan tahay.
“Waxaa la gaaray xilligii dembiga dusha la saari lahaa kuwa falalkaas ah sameeye! ayey tiri Isabella Lövin oo ka tirsan xisbigga Deegaanka ee dalkaan Iswiidhan.
Dhinaca kale kulankan waxaa ra’iisal wasaaraha ku weheliyey wiilkada cadaaladda Morgan Johansson oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in diirsaddu saaran tahay hab dhaqanka ragga oo kolka ay geeystaan fal kufsi ah ama galmo aan raali laga aheyn lana tiigsanayo sharciga. Hindisahan sharciga ah ayaan la ogeyn sida loo arki doono , saas oo ay tahayna waxaa jira shaqsiyaad guux ka keenay durba. Wuxuuna uu ku soo beegmaya xilli kacaanka loogu magac darray #MeToo uu ka hana qaaday dalkaan islamarkaasina bulshadda horteeda ku ceebeeyey shaqsiyaad badan oo ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshadda kuwaas oo awoodahooda mansab ku adeegsaday dumarka la shaqeeya.
Waxaad shaqo bilaabi kartaa maalintaad isdhiibtid